लकडाउनमा प्रेमिकासँग घुम्न बाहिर निस्किदाँ टाइगर श्रापविरुद्ध मुद्दा « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
लकडाउनमा प्रेमिकासँग घुम्न बाहिर निस्किदाँ टाइगर श्रापविरुद्ध मुद्दा
बलिउड अभिनेता टाइगर श्राफ र अभिनेत्री दिशा पटानीलाई मुम्बई पुलिसले एफआईआर दर्ता गरेको छ ।अभिनेता टाइगर श्राफलाई आफ्नी प्रेमिका तथा अभिनेत्री दिशा पाटनीसँग घुम्दा निकै अफ्यारो परेको छ ।
भारतीय समाचार अनुसार टाइगर र दिशा पाटनीविरुद्ध लकडाउनको नियम उल्लघन गरेको आरोपमा प्रहरीले मुद्दा दायर भएको हो । उनीहरुमाथि कोरोना गाइडलाइनको उल्लघंन गरेको आरोप लागेको छ ।
लकडाउनमा बाहिर निस्कनुको सही कारण उनीहरुले दिन सकेनन् । यद्यपी, त्यतिबेला प्रहरीले डकुमेन्ट चेक गरेर उनीहरुलाई छाडिदिएको थियो । प्रहरीले सबै घटनाको जाँच गरेपछि अहिले एफआईआर दर्ता गरेको छ ।
मुम्बई पुलिसका अनुसार दुबैविरुद्ध धारा १८८ अन्तर्गत केस दर्ता गरिएको छ । अहिले यो घटनामा कसैलाई गिरफ्तार गरिएको छैन किनकी यो अपराधमा जमानत मिल्छ । महाराष्ट्रमा १५ जूनसम्म कोरोना कफ्र्यु छ र बिहान ७ देखि २ बजेसम्ममात्रै बाहिर निस्कने छुट छ ।
सुनिल शेट्टीका छोरा अहानसँग अक्षय कुमारले एक्सन फिल्ममा काम गर्दै !
सुनिल शेट्टीका छोरा अहानले अक्षय कुमारसँग एक्सन फिल्म स्क्रिन सेयर गर्दै छन् । फिल्मको विषयमा
कपिलले सार्वजनिक गरे अनायरा र त्रिशानको पहिलो पटक एकसाथ तस्बिर !
भारतीय कमेडियन कलाकार कपिल शर्मा पहिलो पटक आफ्ना सन्तान अनायरा र त्रिशानसँग एकसाथ देख्एिका छन्
अभिनेता अजय देवगणले किने नयाँ घर, जान्नुहोस् मूल्य कति ?
बलिउड अभिनेता अजय देवगणले नयाँ घर किनेका छन् ।अजयले मुम्बईको जुहु इलाकामा एक घर किनेका
पोर्न भिडियो निर्माण गरेको आरोपमा पक्राउ परेकी अभिनेत्री गहना वशिष्ठ रिहा
पोर्न भिडियो निर्माण गरेको आरोपमा पक्राउ परेकी अभिनेत्री तथा मोडल गहना वशिष्ठ रिहा भएकी छन्
फिल्मको टाइटलको विरोधमा चन्डीगढमा जलाइयो अक्षय कुमारको पुत्ला !
फिल्मको टाइटलको विरोधमा भारतीय अभिनेता अक्षयकुमारको चन्डीगढमा पुत्ला जलाइएको छ । अक्षयकुमार अभिनित फिल्म ‘पृथ्वीराज’